Manoratra Bilaogy momba ny Andro Iraisam-pirenena Hiadiana amin’ny SIDA · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2018 20:38 GMT
Vakio amin'ny teny Português, عربي, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Malawi: Zarao ny tantaranao
Tao Malawi, nizara tsiaro iray tamin'ny tafatafa voalohany indrindra niarahany taminà vehivavy iray tsy nanafina ny fitondrany ny tsimokaretina VIH i Victor Kaonga, mpanoratra sady mpanao gazety ao amin’ny Global Voices:
Nandeha mihoatra ny 350 km miala an'i Lilongwe, renivohitr'i Malawi, aho hihaonana amin’io vehivavy io anatinà faritra ambanivohitra ao Zomba. Tsy maintsy nandeha bisikileta teo amin'ny 20 km teo aho niaraka tamin'ny fandraisampeoko sy ny solosainako vao tonga tao an-tanànany.
Hitako fa mendrika ny harahina sy havoaka amin’ny haino amanjery ny tantaran’ilay ramatoa. Ny tsy fanafenany ny fitondrany ny VIH no nanintona ahy taminy, saika fady mantsy ny fanambarana izany tao Malawi tamin'ny taona 1999. Kanefa dia niady tamin’ny olana rehetra nisy tamin’izany fotoana izany izy na dia tsy mbola nisy aza ny ARV. Valo taona aty aoriana, mbola sarotra ny manafoana ny fahanginana volamena amin'ny SIDA ao Malawi.
Bangladesh: Manala ny fady
Ao Bangladesh, namorona andianà petadrindrina mampiseho firaisana ara-nofo azo antoka misy an’i “Mr. Bunny”, kilalao mitazona fimailo fametaka amin'ny fitaratra anaty fiara, i Kathryn B. Ward, mpahay fiarahamonina sy mpikatroka mafàna fo momba ny SIDA. Toy izao ny soratra amin’ilay petadrindrina amin'ny teny Bangla: “Manana fimailo sy vola aho. Andao hiray ara-nofo. Mampiasa fimailo foana ny bitro kinga saina.”
Maneran-tany: Manova ny toetsaina
Namorona sarintany iray afaka kitihina misy ny asa fanaovangazetin'ny Local Voices momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny VIH/SIDA maneran-tany ny Internews. Manasongadina ny tantaran’ireo mpanao gazety izay nandalo fiofanana hanaovana tatitra ampahibemaso mahakasika ilay krizy, sy feo sy soratra avy any Azia, Afrika ary Eoropa Atsinanana izany.
Nanoratra ity lahatsoratra ity i Sylvia Chebet ho an'ny Fahitalavitra Citizen ao Kenya mikasika ny fiarovana ny ra:
Karaiba: Mamerina ny fanantenana very
Ao Jamaika, miresaka momba ny vehivavy mitondra ny tsimokaretina VIH izay nitaky ny fiainany ara-pananahana i Yardflex:
“Afaka manao firaisana ara-nofo ianareo … tsy tokony hanakana anareo hanao izany ny fitondrana ny tsimokaretina VIH…” Maro ny olona mihevitra fa midika ho fiafaran’ny fiainany ara-pananahana ny fitondrany ny tsimokaretina VIH, kanefa atosika hitaky mafy ny famerenana ny fiainany ara-nofo sy ny mba hananany fiainana mahazatra ny Afrikana anatin'ny sokajin-taona rehetra mitondra ny tsimokaretina VIH ankehitriny. “Tamin'ny fanaovana firaisana ara-nofo no nahazoako izao [VIH] ka [nieritreritra aho fa] very ny fiainako ara-nofo ary nahatsapa aho fa tokony hijanona tsy hanao akanjo manaitra maso intsony ka hiandry ny fahafatesana”, Florence Anam, 28 taona, mpitati-baovao ao amin'ny Kenya Network of Women with AIDS (Tambajotran’ny Vehivavy voan’ny SIDA ao Kenya), hoy ny IRIN / PlusNews.
Namorona vohikala haino aman-jery kanto antsoina hoe Heroes of HIV in the Caribbean (Ireo Mahery Fo miady amin’ny VIH ao Karaiba) ny Ivontoerana Pulitzer ho an'ny Fitaterana ny Krizy.
Brezila: Fitsaboana sy fitsaràna an-tendrony
Nahavita namadika ny loza ho tantara fitolomana ho velona i Brezila, na dia avo tokoa aza ny tahan'ny VIH nisy tao aminy. Nanome antoka ny fanomezana ARV (fanafody hiadiana amin'ny virosy mivadika) ho an'ny olona rehetra izay mila izany ny governemanta breziliana hatramin'ny taona 1996. Milaza ilay bilaogera Olhares da Stelinha (pt) fa tsy ampy raha io fitsaboana io fotsiny:
Nahita fomba mahomby hitsaboana ny Syndrome de l’Immunodéficience Acquise (SIDA) izay neken’ny OMS (Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny Fahasalamana) ho tokony arahan’izao tontolo izao i Brezila. Ankehitriny, mila mitady fomba isika, Breziliana, hanafoanana ny fitsaràna an-tendrony an'io aretina io sy ireo mitondra azy ary hanohana bebe kokoa ny maha-isika antsika. Tsy maintsy hataontsika fahazarana ny fialàna amin’ny fitsaràna an-tendrony ary ny fampitomboana ny fisorohana.